Philippines: Efitrano Fanjakana 1000 ary Tsy Mijanona Hatreo
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Cebuano Chichewa Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galoà Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kabyle Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mingrelian Mixe Myama Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Oromo Ouïgour (Sirilika) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tchouvache Tigrigna Tiorka Tojolabal Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Valencienne Wallis Xhosa Zoloa tzeltal Éwé
Niavaka ny Aogositra 2013 ho an’ny Vavolombelon’i Jehovah any Philippines. Nahatratra arivo ny Efitrano Fanjakana naorina tany tamin’io. Toy ny any amin’ny tany maro dia matetika ny fiangonana any Philippines no mila fanampiana, satria tsy manana vola ampy hanorenana Efitrano Fanjakana sady tsy ampy fahaizana hanaovana fanorenana. Nivory tany an-tranon’olona na tany amin’ny trano kely vita amin’ny bararata izy ireo hatramin’izay.
Mitombo foana ny Vavolombelon’i Jehovah any Philippines sy any amin’ny tany maro hafa, ka mihabetsaka ny Efitrano Fanjakana ilaina. Nanao fandaharana àry ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny 1999, mba hanorenana Efitrano Fanjakana any amin’ny tany mahantra. Manome izay azony omena ny Vavolombelona eo an-toerana, ary ampifanampiana amin’ny vola omen’ny avy any an-tany hafa izany. Zarazaraina ho ekipa maromaro ny mpanao fanorenana za-draharaha mba hanampy ny fiangonana hanorina Efitrano Fanjakana. Tamin’ny Novambra 2001 io fandaharana iraisam-pirenena io no natomboka tany Philippines.
Tao Marilao, any Bulacan, no naorina ilay Efitrano Fanjakana faharivo, ary anisan’ilay fiangonana ao i Iluminado. Hoy izy: “Tsapako hoe tena mifankatia isika Kristianina. Be dia be no niasa an-tsitrapo, na lahy na vavy, na tanora na antitra. Nigaingaina be ny masoandro ary reraka izahay rehefa avy niasa mafy nandritra ny andro. Tena faly anefa izahay rehefa nijery ny zavatra niarahanay nanao.”
Gaga koa ireo tsy Vavolombelona mahita an’ireo mpiasa an-tsitrapo. Hoy ny rangahy iray tompona kamiao mpanatitra fasika sy vatokely: “Tena be dia be hoatran’ny vitsika ianareo, sady mifanampy daholo. Mbola tsy nahita hoatr’izao aho.”
Ilay Efitrano Fanjakana efa vita
Tsy ampy iray volana sy tapany dia vitan’ireo mpiasa an-tsitrapo ilay trano. Afaka nandray anjara feno tamin’ny fitoriana ny vaovao tsaran’ny Fanjakan’Andriamanitra foana àry ireo anisan’ny fiangonana, satria vetivety dia vita ny fanorenana an’ilay Efitrano Fanjakana.—Matio 24:14.
Hoy i Ellen, izay anisan’ilay fiangonana koa: “Tsy antonona anay rehetra ilay Efitrano Fanjakana taloha ka be dia be no tsy maintsy nipetraka tany ivelany. Tsara tarehy ilay Efitrano Fanjakana vaovao sady mampahazo aina be. Vao mainka àry izahay mandray soa avy amin’ny fampianarana sy fampaherezana any am-pivoriana.”
Ho hitanao ato hoe nahoana ny olona sasany no niala tamin’ny asany sy nivarotra ny fananany ary nifindra tany amin’ny faritra mitokana any Philippines.